N'afọ 2019, ụlọ ọrụ na-emegharị emepe ga-akwalitekwu mmezigharị usoro nhazi
N'afọ 2019, ụlọ ọrụ na-emegharị emepe ga-akwalitekwu mmezigharị usoro nhazi. Ọrụ niile nke ụlọ ọrụ ahụ kwụsiri ike, nsonaazụ amụbawanye nwa ntakịrị, ogo etolitelarịrị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ esiwanyela nke ọma.
1. Mmepụta a na-akwụ ọtọ ma na-arị elu. N’afọ 2019, ihe nrụpụta nke ngwaahịa na - emezigharị mba niile dị nde tọn 24.308, mmụba n’afọ nke 3.7%. N'ime ha, ngwaahịa nha nha nkwụghachi dị nde 13.414, mmụba nke 1.1% afọ-afọ; mkpuchi ngwaahịa na-egbochi mkpuchi bụ tọn 589,000, mmụba nke 8.9% afọ-afọ; ngwa ahịa anaghị agbazi ngwa ahịa ruru nde 10.305, mmụba nke afọ 6.9% kwa afọ.
Nke abụọ, nrụgide bara uru karịrị. Enwere akụrụngwa 1958 nke refractory, ngwaahịa refractory na ụlọ ọrụ ọrụ ndị ọzọ metụtara ọnụ ọgụgụ ụlọ ọrụ. Mmetụta ọnụ ahịa dị elu nke ọnụahịa nke ngwaahịa na-emetụta ahịa, ego isi ego azụmaahịa na 2019 bụ ijeri yuan 206.92, mbelata afọ maka 3.0%, uru ha dum bụ ijeri yuan 12.80, kwa afọ. mbelata nke 17.5%.
3. Mbupu n’ahịa dara ntakịrị. N’afọ 2019, ebubata ngwa ahịa mbupụ nke ngwa ahịa na ngwaahịa dị $ 1.52 ijeri US, ọnụ ọgụgụ mbupụ kwa afọ bụ nde 5.95, mbelata afọ n’afọ nke 6.3%. N’etiti ha, ebubata ngwa ahịa nke akụrụngwa nke 4.292 tọn, gbadara 5.7% afọ-afọ; mbupụ nke ngwaahịa refractory dị nde tọn 1.666, gbadata 7.7% afọ-afọ.
4. Nkwa ọkwa Green. N’afọ 2019, ụlọ ọrụ niile ga-emekwu ka isi mmiri mmetọ belata, na ọtụtụ ógbè na obodo nyerela ụlọ ọrụ mmepụta ọkụ na atụmatụ ọgwụgwọ mmetọ ikuku iji kwalite mmetọ nke mmiri na-erute iji mezuo ụkpụrụ ahụ. Beenlọ ọrụ ahụ na-eme ka ụlọ ọrụ na-acha akwụkwọ ndụ kawanye mma. Ndi ulo oru ihe omuma na ihe omuma nke ihe nlere choputara ulo oru ugbo elu asaa. “Detuo.
Ka ọ dị ugbu a, mgbanwe na mmepe nke ụlọ ọrụ na - emegharị ngwa ngwa na - eme ngwa ngwa, mana ọnọdụ a ka na - eche ọtụtụ echeghị ihu. Nsogbu ndị dịka ike karịrị ike, itinye uche dị ala, na ike iziputa ihe zuru ezu ka dị. Nzọụkwụ ọzọ bụ ime ngwa ngwa nke teknụzụ ọhụụ na mmepe ngwaahịa ọhụrụ, dabere na isi obodo na ike ika iji bulie ịta ụlọ ọrụ, melite akpaaka ụlọ ọrụ na ọgụgụ isi, mee ka ngwangwa gbanwee na nkwalite, na ịkwalite mmepe dị elu nke ụlọ ọrụ nyocha.
Oge nzipu ozi: Mee-21-2020